မော်လမြိုင်မြို့တွင် အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေများ အသိပညာပေးဆွေးနွေးဟောပြောပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ခြင်း ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမွုဖူလုံေရးဥပေဒပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ ေဒၚသင္းသင္းဦးေျပာၾကားေနစဥ္
မော်လမြိုင်မြို့ ၊ စက်တင်ဘာ လ ၂၅ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ မွန်ပြည်နယ် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် ဝန်ကြီးဌာနမိတ်ဖက်ဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေများ အသိပညာပေးဆွေးနွေးဟောပြောပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၂-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ညနေ(၃:၀၀)နာရီ အချိန်တွင် မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ ကျောက်တန်းစက်မှုဇုံရှိ NCX MAGA CO,LTD,. ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အခမ်းအနားသို့ မွန်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်သင်းသင်းဦး၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မြတ်မြတ်ထွေးနှင့် ဦးစီးအရာရှိ ဒေါ်မြတ်မင်းဝေ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ကြည်အေး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ဝင်းမာဦး၊ NCX MAGA CO,LTD,. မှ အာမခံအလုပ်သမားများစုစုပေါင်း (၆၁) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြ ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ညွန်ကြားရေးမှုး ဒေါ်မြတ်မြတ်ထွေး မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနမှ စည်းကြပ်ဥပဒေများအကြောင်းကို ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မြတ်မြတ်ထွေးနှင့် ဦးစီး အရာရှိ ဒေါ်မြတ်မင်းဝေ တို့ကလည်းကောင်း၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာန၏ စည်းကြပ်ဥပဒေများအကြောင်းကို ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ကြည်အေးမှလည်းကောင်း၊ အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေများအကြောင်းကို ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ဝင်းမာဦးမှလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေအကြောင်းကို လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်သင်းသင်းဦးမှလည်းကောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားကို ညနေ(၅:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။